2013 February | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း – ကျော်သူရိန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း ကျော်သူရိန်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ‘သုခ’ ဟူသည် ချမ်းသာခြင်းဖြစ်သည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ကို စတင်မျိုးစေ့ချ ထူထောင်ခဲ့သော စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ နာယကကြီး ဘဘ ဦးသုခ...
သန်းဝင်းလှိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ယခုနှစ် (၂၀၁၃ ခုနှစ်) မတ်လ ၂ ရက်နေ့သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းခေါင်းဆောင်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီက ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် (၅၁) နှစ် မြောက်နေ့...
ကမာပုလဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ကျောရိုးက ရိုက်ချိုးခံထားရတယ် တွားသွားတကောင်လို … စိတ်ကူးနဲ့ … ထင်မှတ်မှားမှုတွေနဲ့ မိချောင်းမဟုတ် … အိပ်မြှောင်မဟုတ် တီကောင်မဟုတ် … သွေးမလျှောက်တော့တဲ့ ကောင် …။...
မုိုးမခအထောက်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ၂၆. ၂. ၂၀၁၃ နေ့ တွင် ကူမဲမြို့ နယ် အတွင်းရှိဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ဘ/က ပညာရေးအထောက်အပံ့လှူဒါန်းပွဲ ပေါင်းစုဆင်ယင်အထူးဓမသဘင် ကျင်းပရာ ရွှေရောင်ထောက်ပရစ်ဗိမာန်တော်တွင် ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်ကမ္ဘာပထမဆုံး...
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃ ရွှေတြိဂံဒေသတွင် ဖမ်းမိခဲ့သော မူးယစ်ရာဇာနော်ခမ်း နှင့် ၎င်း၏ လက်ထောက် ၃ ဦးတို့ကို ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့တွင် မနက်ဖြန် ဆေးထိုးပြီး ကွပ်မျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
“ရာဇဝင်ကို ရိုင်းစေသူများ” ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း) ၁၉၉၃-ခုနှစ်လောက်ဆီကပေါ့။ အဲဒီတုန်းက မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကြီး သုံးခုရဲ့ (ယခု)ပဓာန နာယက ဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်း လောကတ္ထစရိယာပြစ်မှုနဲ့ နန်းတွင်းဆူညံတောရမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ သီးခြား အပူဇော်ခံ အဖြစ်...
ကာတွန်း အိုကေလင်း – အရပ်ဝတ်တွေ ရှေ့ထုတ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃
BURMA: FROM BAD TO WORSE ငြိ မ်းချ မ်းေ ရးခ ရီးရှ ည်...
လူမဟုတ်သောသူတို့၏ဘေး ကယ်ပါတိုင်းသား၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ မအူပင်နယ်က မလက်တို၊ အဒိတ်၊ ပလောင်ရွာတွေမှာ တောင်သူတွေသွေး မြေခရပြီ။ မြေမခခင်က မြေသိမ်းခံရလို့ ဘဝတွေ ကြေမွပြီးနှင့်ပြီ။ လက်ပတောင်းတောင်မှာ တောင်သူတွေကိုယ်စား သံဃာတွေ မီးလောင်တိုက်သွင်းခံခဲ့ရသည်။...
ကြိမ်မီးတွေလောင်တော့မယ် သီဟသူရ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ လူမထင်သူတွေကြောင့် မအူပင်နယ်မှာတောင်သူသွေးမြေခပြီ။ လယ်သိမ်းမြေသိမ်းတွေကို မထိမ်းကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကြိမ်မီးတွေလောင်တော့မယ်။ အဓမ္မစီမံကိန်းတွေ မထိမ်းကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဖွဲမီးတွေလောင်တော့မယ်။ တောက်မည့်မီးခဲတွေ တရဲရဲနဲ့တိုင်းပြည်။ ယမ်းပုံတွေပြည့်နှက်နေတဲ့တိုင်းပြည် ဘယ်မီးပွားကျလိုက်မလဲ ဝုန်းကနဲလောင်တော့မယ့်တိုင်းပြည်။...
ကာတွန်း – အောင်မော် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း အောင်မော်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဇေယျသုခ အရှင်နန္ဒဝံသ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ဇာတိဋ္ဌာနေ ၊ မွေးရပ်မြေရှိ မေမေ ဖေဖေ ကိုကို မမ မောင် ညီမတို့ သာမာစေကြောင်း ဆုပန်တောင်းရင်း သမီးရင်မှ ခံစားရသည့် သောကဆိုပါ...
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးများမြန်မာပြည် လာပြန်ပြီ ဇော်အောင် (မုံရွာ) ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ဒီနေ့ 26 Feb 2013 ဗွီအိုအေ သတင်းအရ အမေရိကန်လူငါးဆယ်အဖွဲ့ မြန်မာပြည်ကိုရင်းနှီးမြှတ်နှံဖို့ ရောက်ရှိလာတယ်။ အဓိပတိ ထိပ်တန်း...
ကာတွန်းစောငို – ဥပဒေအထက်မှာ စီမံကိန်းရှိတယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ နှင့်ရုံးအဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ၂၀၁၂ ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်ပိုင်းကာလ၊ လွှတ်တော်တွင်း အငြင်းပွားနေသော အခြေခံဥပဒေခုံရုံးဆိုင်ရာအတွက် ရာထူးခန့်ထားမှုများကို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။...
နေပြည်တော်မှ ထုတ်ပြန်ချက် – ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် ဘတ် ၅၅၀ လက်မှတ် ဇော်သူရ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ လက်ခံရရှိသော ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်...
သက်သေ နိုင်ဦးညို(ဖိုးဇီးရိုး)၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ဒို့အရေး ဒို့အရေး မကြားရတာ အတော်တောင်ကြာပြီ၊ ဒီအခွေ မေ့ထားတဲ့သူတွေရှိတယ် ဒီအခွေ ရောင်းစားခဲ့သူတွေရှိတယ် ဒီအခွေ တို့အတွက်အသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုသူတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီအခွေဟာ သုံးကားပေါင်း မိုးအလင်းနဲ့...
ကမာပုလဲ ၂၇၊ ၂၊ ၂၀၁၃ ဂျပန်ကြီး … မင်းချစ်တဲ့ လယ်သမားတွေ မင်း ထကြည့်ပါဦး ရဲဘော်ရာ …။ သဲနဲ့ ဆုပ်ပက်နေသလို အကာအကွယ်မဲ့ စားကျက်ခန္ဓာ ခွေးက လူကို ကန်တာ...